नेपाल घुम्न आएकी अल्मुन्नाहर अन्नीले विमानभित्र जे देखिन्…. - Nuwakot Express
म बंगलादेशी हुँ । मेरो घर राजधानी ढाकामा पर्छ । मेरो विवाह भएको करिब तीन वर्ष भयो । हाम्रो सानो बच्चा पनि छ । नेपालको सौन्दर्यबारे मैले पढेकी थिएँ । नेपाल घुमेर आएका साथीहरूले पनि मेरोसामु धेरै वर्णन गरेका थिए । त्यसैले म नेपाल घुम्न आतुर थिएँ । नेपाल घुम्ने सल्लाह भयो । अरू साथीहरूसँग पनि सल्लाह भयो ।
अन्ततः हामी नेपाल आउने तय भयो, मार्चको दोस्रो साता । नेपाल आउने चाहना राख्ने त अरू पनि थिए, तर उनीहरूको समय मिलेन । अन्तिममा म, मेरो बच्चा र श्रीमान्सहित अन्य दुईजना नेपाल आउने निर्णयमा पुग्यौँ । सात दिनसम्म नेपाल घुम्ने उद्देश्यले हामी सोमबार ढाकाबाट नेपालका लागि उड्यौँ ।
नेपालमा काठमाडौं र पोखरा घुम्ने हाम्रो योजना थियो । यसका लागि हामीले सात दिनको छुट्टी लिएका थियौँ । नेपाल आउन पाउँदा निकै उत्साहित थियौँ । जहाजमा चढेपछि कतिवेला नेपाल पुगिएला भन्ने कौतूहल मनमा थियो । केही घन्टाको जहाज यात्रापछि डाँडाकाँडा देखियो । हिउँले ढाकिएका पहाड देखिए ।
निकै रोमाञ्चित भएर त्यसलाई नियालिरह्यौँ । जहाजभित्र काठमाडौं आइपुगेको ‘अनाउन्स’ भयो । हामी थप रोमाञ्चित भयौँ । जहाज अवतरण गर्न तल–तल झर्‍यो । काठमाडौंका घर देखिए । पछि विमानस्थलको रनवे देखियो । तर, जहाज रन वेतर्फ गएन । मनमा चसक्क पस्यो । जहाज घुम्यो । केही बेरपछि फेरि रेनवे देखियो ।
तर, जहाज सही दिशामा थिएन । जहाज एक्कासि बजारिएको आवाज आयो । जहाजभित्रका सबै आत्तिए । कोही कराउन लागे । कोही चिच्याउन लागे । जहाजभित्र डढेको गन्ध आउन थाल्यो । तर, जहाज रोकिएको थिएन । सिट बेल्ट बाँधिएकाले कोही हिँडडुल गर्न पनि सकेको थिएन ।
तर, सबै चिच्याइरहेका थिए । केही बेरमा जहाज रोकियो । जहाजमा आगो दन्किएको देखियो । जहाजभित्र यात्रुको भागदौड मच्चियो । सबैले गुहार माग्न लागे । कोही रुन थाले । कोही कराउन थाले । मसँगै हुनुहुन्थ्यो मेरा श्रीमान् र काखमा थियो सानो बच्चा । सिट बेल्ट बाँधिएकाले हामी कहीँ जान सकिरहेका थिएनौँ ।
तर, अरूले भने सिट बेल्ट खोलेर जहाजभित्रको इमर्जेन्सी ढोका खोल्दै थिए । कोही जहाजभित्रैबाट सिसा फुटाइरहेका देखिन्थे । हामी भने केही गर्न सकिरहेका थिएनौँ । तर, जहाज झन्–झन् दन्कँदै थियो । के गर्ने केही मेसो पाउन सकिरहेका थिएनौँ । बच्चा काखमा च्यापिरहेकी थिएँ ।
आगो दन्किँदै झन्–झन् नजिक आउन थाल्यो । डरले म सिटमै बसिरहेँ । यत्तिकैमा मेरो हात कसैले तान्यो । त्यसवेलासम्म म अर्धचेत अवस्थामा पुगिसकेकी थिएँ । त्यसपछि के भयो, मैले केही मेसो पाउन सकेकी छैन । अहिले म अस्पतालको बेडमा छु । मेरा श्रीमान् र बच्चा हराइरहेका छन् ।
मैले सबैलाई सोधेँ । तर, कसैले पनि उत्तर दिएका छैनन् । सबैले ‘मिसिङ’ मात्रै भनिरहेका छन् । उनीहरू कहाँ छन् ? मलाई केही थाहा छैन । मसँगै आएका अन्य दुई साथी भने सकुशल भएको खबर पाएकी छु ।आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
प्रकाशमान र गगन थापासँग देउवा रुष्ट, कारबाही गर्नेबारे छलफल !
पुस ३, २०७४ - सोमवार
काठमाडौं, ३ पुस । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा...
तेह्रथुम । छथर गाउँपालिका–१, आङदिमका ज्ञानेन्द्र कार्की सात वर्ष...
रसुवागढी र सान्जेन जलविद्युतको दोस्रो आईपीओ भोलिदेखी, क-कसले भर्न पाउँछन ?
चैत्र ४, २०७४ - आइतवार
नुवाकोट एक्स्प्रेस, ४ चैत : रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड...
नुवाकोट सहितका ८ जिल्लामा व्यवसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानलाई ८ देखि १५ लाख अनुदान
चैत्र २५, २०७४ - आइतवार
काठमाडौँ । व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्न प्रोत्साहन स्वरुप...
लोहनिले भेटे श्रीनिवासाचार्य, स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी
बैशाख २३, २०७५ - आइतवार
नुवाकोट एक्स्प्रेस, २३ बैशाख : एराप्रपा(राष्ट्रवादी)का अध्यक्ष डा ।प्रकाशचन्द्र...